Ireo Fanehoankevitra Manoloana Ny Fisamborana An’i Kem Sokha, Kambodziana Mpikatroka Mafana Fo Ho an’ny Zon’olombelona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Novambra 2018 5:37 GMT
Sarin'i Kem Sokha avy amin'ny VOA
Manolotra antsipirihany misimisy kokoa ny lahatsoratra mikasika an'ireo sorabaventy narantiranty nandritra ny Andro Fankalazana ny zon'olombelona izay nanetsika ny fisamborana. (Namoaka lahatsoratra iray arahana sary vitsivitsy misy ny hetsika tamin'ny Desambra eto sy eto, ny Cambodia Blog – saingy tsy ny sorabaventy voafaritra etsy ambany.) Nandà ho tsy nanakana ny fanehoankevitra malalaka ihany koa ny governemanta.
Khieu Kanharith, mpitondratenin'ny governemanta sady minisitry ny serasera, dia nanambara fa ny governemanta dia nanenjika an'ireo olona roa ireo araka ny lalàna noho ny sorabaventy iray fanakianana izay narantirantin'izy ireo nandritra ny fivoriam-bahoaka tamin'ny andro Fankalazana Iraisampirenena ny Zon'olombelona, tamin'ny 10 Desambra. Nanampy izy fa ny sorabaventy dia nanakilasy an'i Hun Sen “ho Kôminista” sy “mpamadika, nivarotra an'ireo tany (Kambodziana) tamin'ny Vietnamiana”.
“Efa nambaranay tamin'ny lasa fa tena henjana io fiampangàna io”, hoy izy, tamin'ny fandàvana hoe ny governemanta nanao famoretana ny fahalalahana maneho hevitra.
Ny Ambasadaoron'i Etazonia, Joseph Mussomeli, nilaza tao anatin'ireo fanehoankeviny hoe asehon'ireo htsika farany fa somary manao didy jadona ny governemanta fa tsy demokratika. Tao anaty lahatsoratra iray ao amin'ny Cambodia Daily, nanambara i Mussomeli hoe: “matahotra izahay sao tafiditra ao anaty drafitra iray tena goavana hanafoanana ny fanoherana io. Voatohintohina ireo vinavina mikasika ny fifidianana azo itokisana sy tsy mitongilana amin'ny taona 2008 …. Nampitahorin-dry zareo fatratra ny fanoherana ary lasa miha sarotra ny handraisana ho tena izy an'ireny fandriky ny demokrasia ireny .”
Nambaran'ny mpisolovava an'i Virak fa tsy ara-drariny ilay fisamborana, nodisoin'ny sasany koa ireo teny teo amin'ny sora-aventy ary, rehefa hitan'ireo mpikarakara izany, nalàna haingana ilay sorabaventy. Ireo olona sasantsasany mbola manohana hatrany fa ny governemanta iray manam-pandeferana amin'ny fahalalahana maneho hevitra tsy hampiditra am-ponja an'ireo mpikarakara ny hetsika na ny fikambanana izay nitazona ilay sorabaventy.
Naneho ny fahaketrahany ireo blaogera vahiny ivelan'ny firenena manoloana an'ireo zava-misy tato ho ato. Araka ny voalazan'ny lahatsoratra iray tao amin'ny Cambodia Daily, ho an'ireo teratany Kambodziana voatanisa ao anaty lahatsoratra, ny fisamborana dia fampitandremana mba tsy haneho hevitra. Loharano iray tsy fantatra voalaza tao anaty lahatsoratra no niantso fanampiana avy any ivelany:
“Tokony hanao fanelanelanana ao anatin'io raharaha io ny Firenena Mikambana sy ireo firenena matanjaka erantany mba hanampy an'ireo mpikatroka mahery fo ireo”, hoy ny nambarany. “Avy eo, afaka manao ny dingana faharoa ireo Kambodziana amin'ny alalan'ny fihetsiketsehana mba hanafahana an'i Kem Sokha sy ireo hafa.”
Ireo Kambodziana any ivelany monina ao Etazonia mikarakara sy manentana an'ireo teratany amerikana mba hifandray amin'ireo mpiasam-panjakana ao amin'ny governemantany hanehoany ny tsy hafalian'izy ireo amin'ny toe-draharaha. Ity ny lahatsoratra iray misy fanehoankevitra tao amin'ny blaogy an'ny Ivontoerana Fampahalalambaovao ao Kambodza, mitondra ny lohateny hoe Manahiran-tsaina ny Fahalalahana Maneho Hevitra, izay mandrisika ihany koa ny olona tsy hikombom-bava.